Range of T. ferruginea (Compiled by: BirdLife International and Handbook of the Birds of the World (2016) 2014.) Breeding Resident Non-breeding
ဟင်္သာ (အင်္ဂလိပ်: Ruddy shelduck)ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ မြင်ဖူးသူ နည်းကောင်း နည်းမည်ဖြစ်သော်လည်း ကြားဖူးသူကား များပေသည်။ ဟင်္သာသည် အလျား ၂၅ လက်မခန့်ရှိသည်။ အတောင်တွင် အနက်ပြောက်ကလေးများနှင့် အဖြူ ကွက်များရှိရာ ယင်းတို့ကို နားနေချိန်၌ မမြင်နိုင်၊ ပျံသောအခါတွင်မှ မြင်နိုင်လေသည်။ ဟင်္သာငှက်မတွင် လည်ပင်း၌ အမည်းရစ် မရှိချေ။ ဟင်္သာငှက် ကလေးများသည် ဟင်္သာငှက်မနှင့်တူကြသော်လည်း အရောင်မှာ ပို၍ ခြောက်ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ကျောဘက်တွင် အညို ရောင်နှင့်နီညိုရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်များ လှိုင်းကလေး များသဖွယ် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမြီးတွင်လည်း အစဉ်းကြောင်းကလေး ရှိသည့်အပြင် အနားဘက်တွင် နီညို ရောင်ရှိသည်ကိုပါ တွေ့ရ လေသည်။ ဟင်္သာငှက်၏အသံမှာ သာယာတတ်ပြီးလျှင် လွတ်လွတ် လပ်လပ်လည်း အော်မြည်တတ်သည်။ ဟင်္သာဖို၏ အသံနှင့် အမ၏အသံများကို ခွဲခြား၍ သိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သန့်ရှင်းသည့် သဲသောင်ပြင်များကို ဟင်္သာများ ကြိုက် နှစ်သက်ကြ၏။ ထုံးအိုင်များတွင် ဟင်္သာများ နေလေ့ မရှိကြ သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ တွေ့နိုင်လေသည်။ ရွှံ့နွံ ထူထပ်သော ကမ်းခြေများတွင်လည်း ဟင်္သာများကို မတွေ့ရ ချေ။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းခြေတွင်မူ ဟင်္သာများကို ဆောင်းဥတု တွင် အများဆုံး တွေ့နိုင်သောငှက်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ပထမစ၍ ရောက်သောအခါ အုပ်များနှင့် ရောက်လာသော်လည်း ဆောင်းဥတုအတွက် နေထိုင်ရန် နေရာများကို ရွေးချယ်ပြီးသည် နှင့်တပြိုင်နက် စုံတွဲလိုက်သာ နေထိုင်ကြလေသည်။ စုံတွဲလိုက် အမြောက်အမြား နေထိုင်နိုင်ကြသော်လည်း နှစ်ဆယ့်ငါးစုံတွဲ၊ သို့မဟုတ် စုံတွဲပေါင်း ၃ဝ ထက် ကျော်လွန်၍ကား မြင်ရခဲ လေသည်။
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့တွင်တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့ရှားပါး စာရင်းဝင်ငှက်မျိုးစိတ်တချို့ သေဆုံး ပျောက်ကွယ်သွားရသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ပင်လယ် ကမ်းစပ်ဒေသများတွင် နေထိုင်ကျက်စားလျက် ရှိသော ဟင်္သာငှက်၊ ကြိုးကြာငှက်၊ ငှက်ကျားနှင့် စင်ရော်ငှက်များ အုပ်စုလိုက် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသင်းမှ တရားဝင် စာရင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့သော ဟင်္သာငှက်နှင့် ကြိုးကြာငှက်မှာ ကမ္ဘာ့ရှားပါးငှက်မျိုးစိတ် ဝင်များဖြစ်သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မျိုး သုဉ်းပျောက်ကွယ်မည့် အနေ အထားမျိုး ဖြစ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးညွှန်က ပြောဆိုသည်။ ဟင်္သာသည် ရေပျော်ငှက် ဖြစ်ကြသည်။ 
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း ဟင်္သာသည် ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားအလောင်းတော်၏ ဘဝဖြစ်စဉ်တွင် ဟင်္သာ (၁၀) ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းငြိမ်းသောဘဝ ၃၄ မျိုးဟု ယုံကြည်ကြသော ဖြစ်တော်မူ ဘုရားရှိခိုးတွင် “အစကြိုးကြာ၊ဆယ့်ခြောက်ခါနှင့်၊ ဟင်္သာကိုးဖြစ်၊ ခြောက်ဖြစ်ကား ခို”ဟု ပါရှိသည်။ ဇာတ်တော်များတွင်ပါရှိသော ဟင်္သာဘဝစုစုပေါင်းမှာမူ (၁၀) ကြိမ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဘဝဖြစ်စဉ်အစမှ အဆုံးတိုင်အောင် ကာလအတွက်မူ ၁၀ ဂဏန်းအရေအတွက်မှာ လွန်စွာနည်းပါးသည်။
ထူးခြားသော ဖြစ်စဉ်ဘဝ ၁၆ မျိုးကို စတုရန်းအင်းအသွင် ချစီပြပုံကို အောက်တွင်လေ့လာနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားလောင်း ဟင်္သာမင်းသည် ၎င်း၏ လျင်မြန်ခြင်းကို ပြသရန် လည်တွင်ချူဆွဲလျက် တိုင်ထိပ်တွင် နေသည်။ တိုင်ခြေရင်းတွင် အတော်ဆုံးလေးသည်တော် (၄) ယောက်တို့ ကျောချင်းဆိုင်ရပ်ပြီး အရပ်လေးမျက်နှာကို မြားတစ်စင်းစီ ပစ်၏။ ဘုရားလောင်း ဟင်္သာမင်းက မြှားများ မြေမကျမီ ဖမ်းယူကာ လေးသည်တော်တွေရဲ့ ခြေရင်းမှာ ပြန်ချပေးလိုက်သည်။ လျင်မြန်လွန်းသဖြင့် မည်သူမှ သေချာမမြင်ကြရ။ ချူသံကိုသာ ကြားကြရသည်။ မင်းကြီးလဲ အလွန်အံ့ဩပြီး “ဒီထက်ပိုမြန်တဲ့ အဟုန် ဒီလောကမှာ ရှိပါဦးမလား”ဟု ဟင်္သာမင်းကို မေးသည်။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်း ဟင်္သာမင်းက “ဤလျင်မြန်ခြင်းထက် အဆသိန်းသန်း မက လျင်မြန်သောအရာ ရှိသေး၏။ ထိုအရာကား သေခြင်းတရားပေတည်း။”ဟုဆိုရာ မင်းကြီး မှာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်၏။ ဘုရားလောင်း ဟင်္သာမင်းက မင်းကြီးအား တရားပြကာ နှစ်သိမ့်ရသည် ဟု တေရသကနိပါတ်တွင် ပါရှိလေသည်။
↑ BirdLife International (2012). "Tadorna ferruginea". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟင်္သာ&oldid=712816" မှ ရယူရန်
၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။